'वाम गठवन्धन पछि काँग्रेस हतास बनेको छ'
केपी ओलीसंग कुराकानी
चुनावी अभियानका क्रममा गृहजिल्ला झापा पुगेका एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वाम गठवन्धन पछि नेपाली काँग्रेस हतास बनेको बताएका छन्।
उनले नेपाली कांग्रेसले साम्यवाद भनेको के बुझेको छ? भन्ने प्रश्न गर्दै, उनकै शब्दमा, कुतर्कहरुका पछाडि आफु नकुद्ने पनि बताए। अध्यक्ष ओलीसंग हाम्रा संवाददाता उमाकान्त खनालले गरेको कुराकानीको संपादित अंश:
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस यहाँहरुको वाम गठबन्धनले साम्यवाद ल्याउन अग्रसर भएको भन्दै झस्किएको देखिन्छ, कम्युनिष्ट अधिनायकवाद सहितको साम्यवादसम्म पुग्नकै लागि यो गठबन्धन भएको हो ?
नेपाली कांग्रेसको हतासा जुन छ अहिले त्यो अराजनीतिक हो। नेपाली कांग्रेसले साम्यवाद भनेको के बुझेको छ? कुतर्कहरुका पछाडि हामीलाई कुद्नु छैन। ‘साम्य’ भनेको बराबर अनि ‘वाद’। समान अधिकार, समान अवसर, समान सुरक्षा, समान सम्मानको अवस्था समाजमा हुनुपर्छ। सबैको उन्नति, प्रगति हुनुपर्छ। यो भन्दा नराम्रो प्रणाली भयो? साम्यवादी प्रणाली अथवा कम्युनिष्ट अन्तर्गतको व्यवस्थामा चीनले गरेको उन्नति, प्रगति र त्यहाँका जनताको जीवनस्तरका बारेमा के भन्छ कांग्रेस?
यो चाहिं अन्य मुलुकहरु जस्तो निरङ्कुशता लाद्ने साम्यवाद होइन भन्न खोज्नुभएको हो ?
उत्तर कोरियाले आफूलाई साम्यवादी वा साम्यवादी पार्टी भनेको छैन । उत्तर कोरिया उत्तर कोरिया किन भन्ने? किन नभन्ने इदी अमिन? किन नभन्ने अर्को एउटा तानाशाह? सुहार्तोको कुरा किन नगर्ने? मार्कोसको कुरा किन नगर्ने? त्यसर्थ यस्ता खोक्रा बहसहरुमा देशलाई अल्झाउनु भनेको निरर्थक कुराको आश्रय लिनु हो। नेपाली कांग्रेस त्रासबाट ग्रस्त छ। नेप्से परिसूचक घट्छ कम्युनिष्टहरु आए भने जस्ता पिन्चे कुरा हुन्। चिनियाँ अर्थतन्त्रमा नेप्से परिसूचक के हुँदैछ? अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनको सदस्य छ कांग्रेस। तर समाजवादको विरुद्धमा छ।
तर कांग्रेसले वीपीको समाजवादी सिद्धान्त अनुसार हामी समाजवादी हौं भनेर हिँड्या छ त ?
त्यो परिवर्तित सन्दर्भ र समय कांग्रेसले बुझेन बुझ्दैन। वीपी बाबुले एक हल गोरु एउटा गाई भन्नुभएको थियो त्यो समाजवाद हो। केपी ओली पूर्व पश्चिम रेलका कुरा गर्छ, कसरी समाजवाद हुन्छ? राजमार्ग चौडा बनाउने कुरा गर्छ, कसरी समाजवाद हुन्छ ? हल गोरुको कुरा वीपी बाबुले गर्नु भएको थियो, ओली ट्रयाक्टर अथवा अन्य मेसिनिकरणको कुरा गर्छ। आज वीपी कोइराला भएको भए मैले भनेको कुरा भन्नुहुन्थ्यो होला। वीपीले त्यस जमानामा राणा शासनबाट भर्खर उम्किएको समाजको अवस्थामा त्यतिबेलाको समाजलाई अगाडि बढाउन किसानहरु माथिको चिन्ता, ८० प्रतिशतभन्दा माथि निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि भएको अवस्थामा, निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनिका जनताको आर्थिक उन्नति र उत्थानको विषयमा बोल्दा त्यतिबेला जे बोल्यो त्यो भन्दा मास्तिर समय देख्दैन, यो विचरा कांग्रेस त्यस्तै हो ।
यसपटक मेरो र प्रचण्डजीको बीचमा एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्ने सहमति भइसकेको थियो। तर पछि उहाँहरुको पार्टीमा अलिकति समस्या पर्यो। हामीले त्यसलाई सहज रुपमा लियौं । कहिले कहिले त्यस्ता अप्ठ्याराहरु हुन्छन् । जुन विन्दुमा हामी सहमति गर्नुपर्छ, एकता गर्नुपर्छ भन्नेमा पुग्यौं, चुनाव आइसकेको थियो
चुनावी तालमेल तथा गठबन्धनको कुरा जोडौं, एमालेले भन्ने गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले भन्ने गरेको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद, यो कहाँनेर आएर तालमेल भयो?
अलिकति भइसकेको छैन। उहाँहरुले जनताको बहुदलीय जनवाद मान्यौं भनिसक्नु भएको छैन । त्यति हो।
जनताको बहुदलीय जनवाद मानेको छैन भनेपछि पार्टी एकीकरण कसरी संभव होला?
अहिले त्यस विषयमा जानै पर्दैन। म तपाईं वा सञ्चार माध्यममार्फत उहाँहरुलाई कुनै सन्देश पठाउन चाहन्न । उहाँहरुसंग हाम्रो भेटघाट नहुने होइन, कुराकानी नहुने होइन, छलफल नहुने होइन। हामी उहाँहरुसंग संवाद गर्छौं । सही विषयमा, सही कुरामा सहमति हुन्छ ।
त्यसोभए माओवादीले माओवाद छाड्छ त?
तपाईंले अलि उत्तेजक खालको प्रश्न गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। चुनावी तालमेल गरिरहेका छौं, सहकार्य गरिरहेका छौं, हामी संवादमा छौं । के छोड्छ के छोड्दैन, या कुन विन्दुमा आएर मिलन हुन्छ केही समय तपाईंहरुले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ।
माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्ष जसलाई उसले ‘जनयुद्ध’ भन्छ। पहिला आलोचना गर्नु भयो, अहिले आएर एमालेले त्यो ‘जनयुद्ध’लाई स्वीकार गरेको हो? किनभने तपाईंहरुको घोषणापत्रमा त लेखेको छ ?
यो सैद्धान्तिक बहसमा गइरहनु पर्दैन। उहाँहरुले सञ्चालन गरेको जनयुद्धको एमालेले आलोचना गरेर ठिकै गरेको थियो। उहाँहरुले जनयुद्ध छोड्नु भयो, त्यो बाटो छोड्नु भयो, शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आउनुभयो । एमालेका निम्ति खुशीको कुरा हो, देशका निम्ति खुशीको कुरा हो, जनताका निम्ति तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका निम्ति खुशीको कुरा हो । जनयुद्ध भनिएको प्रसंग कतै उल्लेख होला । त्यो शब्द त्यति मान्नुपर्दैन जति त्यस बाटोलाई छोडेर उहाँहरु आउनु भएको छ। यो नै सकारात्मक कुरा हो।
पार्टी एकताको कुरा गर्दा चुनाव सरेको भए त्यो बीचमा तपाईसँग पार्टी एकता घोषणा गरेरै चुनावमा जाने सहमति भइसकेको थियो भनेर प्रचण्डले चितवनमा भनेका छन्। के त्यो सत्य हो?
हुन सक्थ्यो। यसपटक मेरो र प्रचण्डजीको बीचमा एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्ने सहमति भइसकेको थियो। तर पछि उहाँहरुको पार्टीमा अलिकति समस्या पर्यो। हामीले त्यसलाई सहज रुपमा लियौं । कहिले कहिले त्यस्ता अप्ठ्याराहरु हुन्छन् । जुन विन्दुमा हामी सहमति गर्नुपर्छ, एकता गर्नुपर्छ भन्नेमा पुग्यौं, चुनाव आइसकेको थियो। त्यसैमा अल्झिएर धेरै बहस गर्न सक्दैनथ्यौं। पछि सर्यो भन्ने उहाँको कुरा ठिकै हो यो तालमेलका लागि, एकताका लागि, उहाँको योगदान असाधारण छ, महत्वपूर्ण छ। उहाँको योगदान हुँदैनथ्यो भने एक्लै गरेर हुँदैनथ्यो। एक हातले ताली बज्दैनथ्यो।
त्यसोभए चुनाव सरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ?
चुनाव सर्ने भन्ने कुरा त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन कुनै पनि अर्थमा। चुनाव सार्नै मिल्दैन। एकीकरण पछि गरे हुन्छ।
एकीकरणपछि पार्टी अध्यक्ष को भन्ने कुरा भएको छ ?
मेरो एजेन्डा पार्टी अध्यक्ष होइन। प्रधानमन्त्रीको पद होइन। को कुन कुर्सीमा बस्छ भन्ने होइन। म देश र जनताप्रति समर्पित छु। उद्देश्यहरुप्रति समर्पति छु। यो कुनै सहमति भएको पनि छैन। लेनदेन भएको पनि छैन।
पछि यही कुरा नमिलेर पार्टी एकीकरणसम्मको विषय बिथोलिने त होइन?
बिग्रियो कहाँ भन्दा यहाँबाट कुदेर दिल्ली पुग्ने अनि ‘हजुर हामीलाई समान व्यवहार भएन’ भनेर जाने भएपछि सम्बन्ध बिग्रिएको हो। चीनसंगको सम्बन्ध पनि बिगार्न सकिँदैन। चीन हाम्रो असल मित्र हो । हाम्रो सम्बन्ध समनिकटताको हो
देश र लोकतन्त्रका निम्तिको आवश्यकता र संविधानको कार्यान्वयनको आवश्यकताका बारेमा हामीबीच कुरा भयो। एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशक बित्न लाग्दा पनि हामी विकासमा धेरै पछाडि पर्यौं। अब साना तिना कुरामा नअल्झी हामीले देशका निम्ति गर्नुपर्छ भनेर फराकिलो मन बनाएर हामीले यो काम गरेका हौं।
तपाईकै कतिपय नेता कार्यकर्ताले चुनावमा राम्रो प्रदर्शन गर्नसक्ने सामर्थ्य हुँदा हुँदै माओवादी सहकार्यमा ल्याएको भनि टिप्पणी पनि गरिरहेका छन् । तपाईलाई पनि कतै त्यस्तो लाग्दैन ?
एमाले चुनाव लड्न सक्दैन भनेर होइन। देश बनाउन ढिलो भइरहेको छ यहाँ। अब यस निर्वाचनबाट स्थायी सरकार दिने र देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि लाने काम गर्नुपर्छ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ भारतसंग लम्पसार पर्नु भयो भनेर खुब आलोचना गर्नु भयो। कसरी यति छिटै विश्वास गर्नुभयो प्रचण्डलाई ?
आकस्मिक रुपमा भयो, अचानक भयो भन्ने होइन। समय रोकिएको थिएन प्रक्रिया चालु थियो। तपाईं खोलामा पसेर अलिकित पौडेर पारी तरिसकें भन्ने ठान्नु हुँदैन। पारी तर्न बाँकी हुन्जेल अर्काले उछिन्ने संभावना हुन्छ।
त्यतिबेला पनि माओवादी केन्द्रसंग कुरा भइरहेकै थियो ?
त्यतिबेला भएको थिएन। तर समय रोकिएको थिएन। हामी त्यहीँ थियौं। यहीँ छौं फेरि।
माओवादी केन्द्र अहिले पनि सरकारमा छ । विनाविभागीय मन्त्री भएर बसिरहेका छन् । के तपाईंले नै सुझाव दिनुभएको हो सरकार नछोड्नु भनेर?
मैले पनि भनेको हो । चुनाव हुन नदिने, विभिन्न बहाना बनाउने, चुनाव पर सार्ने सोचहरु छन्, प्रयासहरु भइरहेका छन् । ती प्रयासहरु सफल हुन दिनु हुँदैन । त्यसकारण माओवादीले चुनावसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई साथ दिने र चुनाव गराउनका निम्ति सरकारलाई साथ दिने हो। मेरै सुझाव मानेको पनि होइन । मैले निस्किनुहोस भन्दा ननिस्केको पनि होइन।
माओवादी केन्द्रले सरकार छोडेको भए चुनाव भाँडिनसक्थ्यो ?
हुनसक्थ्यो, विभिन्न बहाना हुनसक्थे। निहुँ खोज्नु त हो नि।
भारत र चीनविचको समदूरी कायम रहनुपर्छ भनेर विगतदेखि नै भन्नुभयो तपाईंले। त्यो समदूरी भनेको के हो?
मैले समनिकटता कायम हुनुपर्छ भनेको छु। अत्यन्त समस्यारहित सम्बन्ध हुनुपर्छ पारस्परिक लाभ तथा हितको सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ। एक अर्काका सार्वभौमसत्तालाई, स्वाधीनतालाई सम्मान गर्नुपर्दछ। एउटाले आफ्नो स्वाभिमानको कुरा गर्दा राम्रो लाग्ने तर अर्काको स्वाभिमानको कुरा नराम्रो लाग्ने हुनुहुँदैन। भारतसंगको हाम्रो सम्बन्ध कसैले बिगार्नै सक्दैन। यहाँ केही स्वार्थी तत्व छन् जसले आफ्नो स्वार्थका लागि भारतसंगको सम्बन्ध बिगार्न चाहन्छन् । म प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दी लागिरहेको थियो सम्बन्ध बिगारिदिएर। मधेश बन्द थियो। ती सबै समस्या समाधान भए नाकाबन्दी खुलाइयो। म भारतको राजकीय भ्रमणमा गएँ अत्यन्त आत्मीय व्यवहार भयो। राष्ट्र हितमा नयाँ नयाँ विभिन्न समझदारीहरु भए। असमझदारी हटे। समझदारी माथिल्लो स्तरमा उठ्यो। बिग्रियो कहाँ भन्दा यहाँबाट कुदेर दिल्ली पुग्ने अनि ‘हजुर हामीलाई समान व्यवहार भएन’ भनेर जाने भएपछि सम्बन्ध बिग्रिएको हो। चीनसंगको सम्बन्ध पनि बिगार्न सकिँदैन। चीन हाम्रो असल मित्र हो। हाम्रो सम्बन्ध समनिकटताको हो।
भारतसंगको सम्बन्ध त अलि विशिष्ट किसिमको छ भनिन्छ, भौगोलिक निकटता र सामाजिक संरचनाको आधारमा । चीन र भारतसंगको सम्बन्ध एकनासमा जान सक्छ र?
केलाई एकनास भन्नुहुन्छ? केलाई विशेष भन्नुहुन्छ? तपाईं र म घर जोडिएका छिमेकी हुनसक्छौं, अर्को अलि पर्तिर हुनसक्छ । तर घर जोडिएको छिमेकी भन्दैमा उसको पारिवारिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न मिल्छ? उसको सम्पत्तिमा दावी गर्न मिल्छ? दुःख दिन मिल्छ ? त्यसर्थ राष्ट्र राष्ट्रबीचका सम्बन्धका कुरा, सार्वभौमसत्ता तथा समानताका कुरामा उँचनीच हुँदैनन्। यो कुरा बुझ्न गाह्रो छैन बुझ्न चाह्यो भने।
Previous Story Previous post: Marxism, Leninism and Dialectic Materialismabasis for party merger says Dahal
Next Story Next post: Health and Migration Research in Nepal Event At Bournemouth University